Somaliland oo laga hor joogsaday inay diiwaangelin ka samayso Buuhoodle xilli Puntland & Khatumo guulo ka sheegteen.
Puntlandtimes (Buuhoodle)-Taliska ciidanka Daraawiishta Puntland oo kaashanaya ciidamada deegaanka iyo shacabka gobolka Cayn ayaa la sheegay inay ku guulaysteen ka hortegista diiwaangelin ay Somaliland inay ka samaysay magaalada Buuhoodle iyo deegaamo kale oo katirsan gobolka Cayn.
Taliyaha ciidamada Daraawiishta Puntland ee aagga gobolka Cayn ayaa sheegay inay ciidamo dhigeen deegaamo dhowr ah isla markaana ay dadka deegaamadaasi ka soo horjeedaan in guud ahaanba gobolka la keeno diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka golaha deegaanka iyo barlamaanka ee maamulka Somaliland.
Saraakiil katirsan maamulka Khaatumo oo isku xilqaamay in Somaliland laga ilaaliyo gobolka Cayn ayaa dhankooda sheegay inay heegan buuxa ugu jiraan sidii looga hortegi lahaa dhaqdhaqaaq kasta oo ay Somaliland ku doonayso inay diiwaan gelin uga samayso Buuhoodle iyo deegaamada kale ee gobolkaasi ka kooban yahay.
Dhanka kalena, odayaasha dhaqanka ee gobolka Cayn ayaa la sheegay inay ku guulaysteen in gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey dilka mid kamid ah cuqaasha gobolkaasi oo maalin kahor lagu diley magaalada Buuhoodle, si looga hortago isku dhac ka dhex dhaca beelaha walaalaha ah.
Waar wax Puntlayn la yiraahdo lagama yaqaan Buuhoodle, ciidankaygaa mandaqaddan hawd ka taliya ee adyadda halla iska daayo.
Waar hooy ciyaarta iyo dhaantada iyo dhuusada iyo beenta hala joojiyo.
Buuhoodle waa togdheer burco ayaa laga xukumaaa welina hawsheeda looma soo jeesen yaa is gaadhayba.
Diiwaangelintu way ka dhacaysaa ninkii been iyo dhuusayaba cidina idiin joojin mayso Arinku waa sidaa halagu biyo cabo.
Pudhlijn kulahaa waar pudhlijn Eri boowe waa budhbudhay way rafaneysaa Tuuladii Sharka GADHOOWE.
Runsheeg. Ma dhuusaa waa dii maydkaaydkaag la wadhay kalshaale .EE baroortu is qabsaday Burco ilaa gebilay. Car imaada washakhyahay buuhoodle.
Darwish ceydu waa maxay, Darwiishyadu sidaa uma hadli jirine, waxbay iskula hadhi jireen, xidid iyo xigto waa la yahay, hadalkaaga ciyaala suuqa ah bedel, cidna kuma meteshid
Ali Aar. Runsheeg wax uu ku hadlay waa amaan miyaa ? SNM wax ka cay iyo aflagaad badan ma jiraan EE din iskugu dhoqda.
Dharbaxo weyne says:
Reer buuhoodlo is difaaca, hadii la arko idinkoo isdifaacaya waa la idiin hiilin…ha noqonina sida laascanood. Iiidoorku waa doqon waraaba ah haduu arko iney meesha jilicsan tahay hunguri ayaa ka soo gali.. ceyriya iiiiidorka hadiikale noqda sida habraha laascanood
Nacasnimadaada kii dad kuugu xigay ayaad ku diganaysaa, bal adigu kaalay Laascaanood Iddoor ayaa ku aroosi doona bakh, bakh kaaga siin doona googard intuu kuu xidho halkaa wada lugee oo laafyood sida xaawlayda ku odhan doona..
Halkan in aad sida dumarka.. keyboard.. ku dagaalanto xaq ayaad u leedahay. lakiin Laascaanood kaftan mayaalo ha isku tagin waa lagu aroosi sida xaawalada dhidhiibso ayaa lagu odhan naayaa… waa iga talo.